Nahoana No Manome Fidirana Maimaim-poana Ho An’ny Vehivavy Manao Kiraro Avo Vodi-tongotra Ny Tranombakoka Ara-jazakanto Rosiana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2016 8:26 GMT
Pikantsary avy amin'ny rakikira an-tsary amin'ny hira vaovaon'ny tarika Leningrad “Display Exhibit” (“Exponat”). YouTube.
Nahasarika mpijery maherin’ ny 32 tapitrisa ny lahatsary an-kira tao amin'ny YouTube tao anatin'ny telo herinandro monja. Eny fa na dia hoan'ny iray amin'ireo tarika mpihira rock malaza indrindra ao Rosia aza, nahitam-pahombiazana goavana ny hira vaovaon'ny tarika Leningrad “Display Exhibit” ( “Exponat”). Milaza tantara-na tovovavy iray handeha hihaona amina lehilahy antsoina hoe Serge any amin'ny fampirantiana zavakanto mampiseho ny sangan’ asan'i Vincent Van Gogh ny hira. Mamerimberina amin'ny endri-tsehatra vetaveta mampiavaka an'i Leningrad amin'ny hoe “Ao anaty Louboutins, manao, ary manao ao amin'ny silipo mahafinaritra” ny redon-kira,[mpihira lafika hoy ny sasany] . (Amin'ny teny Rosiana dia miady rima ny tononkira.)
Mampiseho bebe kokoa ny mpandray anjara fototra ny lahatsary an-kira. Manomboka amin'ny resak'ilay vehivavy amin'i Serge ao amin'ny karajia ifankahitana an-tsary (video chat) fa vao avy nandà ny vola fanampiana avy amin'ny rainy mpanankarena izy ary nifindra tamina trano iray manokana hanohy ny zavakanto. I Serge, izay nitafy tahaka ny mpandraharaha ary ravahan'ireo famantaranandro amin'ny rindriny mampiseho ny ora ao Moskoa sy ao Tokyo, kosa dia liandiana fotsiny amin'ny kisarisary ataon-dravehivavy (izay ho fantatsika aoriana kely fa laingan'ilay vehivavy izany) ka nanasa azy mba hijery fampiratiana Van Gogh vaovao.
Rehefa avy nanaiky amim-pahamaotinana ny fanasan'i Serge ary namarana ny antso ilay vehivavy manomboka mitsambikimbikina amin-kafaliana, milaza ny maha-mahafinaritra azy. Mandalo ny reniny, ary mahatsapa ny mpijery fa nandainga momba ny fifindrana trano (sy ny hoe manankarena) ilay tovovavy. Mandany ny ambin'ny lahatsary amin'ny fitadiavana akanjo lavorary indrindra izy mba hisarihana an'i Serge haka vady azy sy hananany fiainam-piadanana araka ny antenainy. Voalohany aloha dia nandrahona namana iray izy mba hampindrana azy kiraro Christian Louboutin avo dia avo, ary avy eo miezaka mafy izy mba ho tafiditra anaty pataloha jean tery dia tery tsy hahatafiditra azy.
Nitady fatratra voditongo-kiraro miloko mena izy ka nandoko ny farany ambanin'ny Louboutins amin'ny varinesy mena ary manamaina izany akaikin'ny fitaovana manome hafanana. Nisy fotoana nandalo ny reniny raha niezaka mafy nampiditra ny pataloha jean tsy antonona azy izy. Nahazo teny masiaka ny reniny ho mitahiry mofo be loatra ao an'efitrano sy noho ny fironana mankany amin'ny “tavim-pe,” [dodosy ngezabe] izay tsy ahafahan'ny zanany vavy ankehitriny hitafy ilay pataloha mety indrindra. “Aza miresaka mofo toy izany!” hoy ny reniny namaly. “Niaina ny Fahiranon'[ny Leningrad] ny renibentsika!” Raha mbola midridridridry ilay tovovavy dia namaly avy hatrany, amim-pitomaniana indray, “Niaina ry renibe, saingy potika aho.”
Na dia tafiditra ihany aza ilay pataloha nony farany, dia tsy tapitra hatreo ny olan'ny maherifontsika. Afaka manatevin-daharana ireo olona an-tapitrisany hafa ianao mijery ny fiafaran’ ny lahatsary mampitebiteby, izay zara raha mila fahaizana teny Rosiana tsara hankafizana izany:
Tamin'ny 26 Janoary, tapa-bolana eo ho eo taorian'ny fivoahan'ny lahatsary, nanambara ireo mpikarakara ao amin'ny Artplay, tranombakoka ao Moskoa izay manatontosa ny fampiratiana Van Gogh ankehitriny fa hanalava ny seho hatramin'ny Andron'ny mpifankatia izy ireo. Amin'ny faran'ny herinandron’ ny 13 sy 14 Febroary, hanolotra fidirana maimaim-poana ho an'ny vehivavy manao kiraro avo vodi-tongotra farafahakeliny mirefy 10 santimetatra ny tranombakoka. Ary mahazo fihenam-bidy 50 isanjato amin'ny tapakilan'izy ireo kosa izay lehilahy antsoina hoe Serge (mitondra ny maripanondroana mety amin'izany).
Sary: Yulia Topolnitskaya / Vkontakte
Taorian'ny fanambaran'ny Artplay, nangataka tamin'ny fampahalalam-baovao ireo Rosiana solontena avy amin'ny Christian Louboutin mba tsy hilaza ny anara-marik'izy ireo ao amin'ny fampiratiana Van Gogh, nolazainy fa tsy mbola nankatò ny fampiasana ny anarany miaraka amin'ny fampiroboroboana “marika hafa” io marika io.
Na dia teo aza ny tsy fitiavan'ilay mpamokatra kiraro ny fampiasana ny anaran'ny marika, nipoitra tamin'ny fahitalavi-pirenena i Leningrad roa andro taty aoriana ary nanatontosa mivantana amin'ny hirany malaza, amin'ny fampiasana im-polo kely ny fehezanteny teny hoe “ao anaty Louboutins”. (Na izany aza, nanaiky nanolo ny vetaveta amin'ny hirany ho amin'ny teny madio ny tarika. Tamin'ny tsanganana Instagram iray no nilaza io fihetsika io ho marimaritra iraisana ahafahana miseho amin'ny fahilavitra ny lehiben'ny tarika, ​​Sergei Shnurova.)
Mandritra izany fotoana izany, nanjary nalaza tampoka tao Rosia i Yulia Topolnitskaya, mpiantsehatra 24 taona izay hita indrindra tao amin'ny lahatsary an-kira. Heverina ho mankafy ny fandefasan-tsary izy, manaiky hanaovana antsafa maro, izay matetika nanontaniana ny amin'ny vata-tenany (izay mazava ho azy fa tany no tena nifantohan'ny lahatsarin'ny tarika Leningrad). Milaza izy fa fanahy iniana nataony ny hahazo lanja kely talohan'ny fakàna ny horonantsary saingy nilaza izy fa efa misahirana mamerina ny bikany ho kelikely kokoa amin'izao fotoana izao.
Ankoatra ny bikan'i Topolnitskaya, hita mazava fa mampihomehy ny fihetsiny amin'ny lahatsary. Ary farafahakeliny, mpisera Youtube 32 tapitrisa no toa miombon-kevitra amin'izany.